U fiican Tucson, U Fiican Ganacsiga. - Wadashaqaynta Tucson Pima si loo joojiyo Hoylaawe
Ku wanaagsan Tucson, Wanaagsan Ganacsiga.
Bulshooyinka ay muwaadiniintu degen yihiin oo ka shaqeeyaan waa firfircoonaan iyo amaan. Bulshooyinka guri la'aantu ku tahay lacag wadaagga kharashyada sarre ee cashuurta dollar, fursadaha lumay, murugada aadanaha ee dadka la il daran hoy la’aan, iyo hoos u dhigidda tayada nolosha qof walba!
Soo afjarida hoy la’aanta waa iskaashi, dadaal bulshada oo badbaadiya canshuurta doolarka, furitaanka fursadaha, hagaajinta tayada nolosha, iyo wanaajinta jawiga ganacsiga. Soo afjarida hoy la'aanta waxay u baahan tahay bulshada oo dhami inay wada shaqeeyaan. Waa kuwan tusaalooyin.
Laga soo bilaabo Oktoobar 2015, Magaalada Tucson Ward 5 xubin Member Richard Fimbres wuxuu si joogto ah isugu keenay koox mas'uuliyiin dowladeed ah, milkiileyaal ganacsato ah, ururo ku saleysan caqiido, TPCH, xubnaheeda iyo adeeg bixiyaasha kale iyo bulshada hoy la'aanta ah. Wadashaqaynta noocan ahi waxay dhiirrigelisay horumar la taaban karo.
Jacome Plaza waxay tusaale u tahay kobcinta jawiga ganacsiga iyadoo loo marayo soo afjarida hoy la'aanta.
"Guud ahaan Isku xidhka DTP, Shaqsiyaadka 84 ee la soo deristay hoy la’aanta waxay ku xirnaayeen guryo sedex bilood gudahood iyo dejin hoy la’aan ah ayaa gebi ahaanba loo beddelay barxad firfircoon oo dadweynaha oo dhan ay ku raaxeysteen. Annaga oo la kaashanayna ururo kaladuwan aagga Tucson, waxaan naaqusaynaa hoy la’aanta magaaladeena, ”ayey tiri Kathleen Eriksen, Madaxweynaha iyo Maamulaha Iskaashiga Magaalada Tucson (DTP).
Dhaqdhaqaaqa Isbeddelka Tucson wuxuu bixiyaa taageero joogta ah
DTP waxay sidoo kale la shaqeysay Isbahaysiga Afaraad ee Wadada, Ward 5, iyo Park Tucson si loo bilaabo Dhaqdhaqaaqa Isbeddelka Tucson ee Bishii Mee 2017 iyada oo 20 loogu deeqay mitiriyada baarkinka taas oo dadku ay ku siin karaan beddeladooda - ama u isticmaalaan deynta ama kaararka deynta - si ay u taageeraan sababaha la xiriira hoy la'aanta , laga bilaabo Barnaamijka Shaqala'aanta ee Tucson. 2018, sida Barnaamijka Shaqo la'aanta ee Tucson waxay gashay sannadkeedii labaad, waxay ku guuleysatay Abaal marinta 'Common Ground Award' oo ka socota Isbahaysiga 'Metropolitan Pima Alliance', iyo abaalmarin ay leedahay shirkadda 'National House of Housing iyo Saraakiisha Dib-u-kobcinta (NAHRO)' bishii Juulay 2018.
HS Lopez Family Foundation waxay taageertaa adeegyada hadda jira, mustaqbalka
Humberto S. iyo Czarina Lopez waxay si deeqsinimo leh ugu biiriyeen adeegyada hoylaawayaasha hadda jira, iyagoo siinaya Xarunta Haweenka Sister Jose qolka Czarina, halkaasoo ku saabsan cuntada 3,800 loogu talagalay haweenka bilaa hoyga ah bil kasta, iyo iibsashada iyo siinta kormeerka Howlgalka Badbaadinta Injiil ee Holiday hore. Inn Palo Verde si uu u noqdo kan cusub Xarunta Fursadda, halkaasoo dadka bilaa hoyga ah iyo kuwa halista ku jira ay ka heli karaan ama ku xiriirin karaan dhammaan adeegyada ay ugu baahan yihiin hal meel, 4550 S. Palo Verde Blvd.
Fadlan ku soo biir TPCH si loo dhammeeyo hoy la'aanta ee Degmada Pima! Ku tabaruc maanta.
Kharashaadka Sare ee Doolarka Canshuurta
Daraasad dhowaan la sameeyay ee xogta TPCH waxay muujisay in lixda bilood ee kahoreysa kahor intaan lagu qiimeyn u diritaanka guryaha iyadoo loo marayo Nidaamkayaga Soogalootiga Isuduwida ah, dadka ay la kulmaan hoy la’aan:
Waaxyada gurmadka degdegga ah ee la booqday in kabadan 36,000 jeer
Waxaa isbitaalka la geeyay ambalaas in kabadan 15,000 jeer
Isbitaal ayaa la jiifiyey in kabadan 17,000 jeer
Adeegyada qalalaasaha la adeegsaday, oo ay ku jiraan 911, in ka badan 19,000 jeer
Lagu dhexgaley meelmarin sharci in ka badan waqtiyada 25,000 (badanaa qaladaadka ka dhasha guryo la'aanta), iyo
Kudhacay ugu yaraan hal habeen qol haystay, xabsi ama xabsi in kabadan 9,000 jeer.
Ku dhawaad ​​dhammaan adeegyadan waxaa lagu bixiyay doollar canshuur. In yar oo aan ahayn khasaaraha soo gaadhay adeegbixiyaha.
Kharashaadka canshuur-bixiyeyaasha waxaa lagu yareyn karaa ama laga fogaan karaa guryaha iyo adeegyada la hago ee buuxiya baahiyaha qofka ka hor inta aysan noqon mid muhiim ah. Guriyeynta waxay gacan ka geysaneysaa hagaajinta caafimaadka qofka guriga ku hayaa waxayna u sahashaa inay helaan waxbarasho, tababar iyo shaqo!
Xaqiiqdii, Waaxda Dabka Tucson ee Tucson iskaashiga bulshada ee daryeelka, TC3, waxay yareynaysaa kharashyada noocan oo kale ah iyo hagaajinta nolosha iyagoo ku xiraya kuwa soo waca 911 - hoy la’aan iyo hoy - adeegyadda bulshada ee loo baahan yahay.